Ny sabotsy 2 martsa no nanendaka sady nanapaka filahiana lehilahy iray ka nitarika fahafatesana ny jiolahy roa, teny Mangarivotra Faravohitra. Ny alakamisy 6 Marsa lasa teo tetsy Besarety, no voasambotry ny Polisy ilay lehilahy iray. Fantatra ihany koa fa vao nivoaka ny fonja ny volana desambra lasa teo, nohon’ny resaka fanendahana ihany ity lehilahy ity no izao tra-tehaka izao indray.
45 TAPITRISA ARIARY VOAROBA
Vola avy tao amin’ny tobin-tsolika iray izay nentina fiara saika haterina tany amin’ny banky no voatafika. Ny talata teo no nitranga teo Ankadimbahoaka izany fanafihana mitam-piadiana izany. Nitondra moto ireo jiolahy manodidina ny enina ary nibahana avy hatrany ilay fiara ihazo an’ny Tanjombato izay misy ny banky. Nanapoaka basy ireo olon-dratsy rehefa nijanona ny fiara, nanambana ny mpitondra vola izay nahitana ny mpitantana ny tobin-tsolika. Nirifatra nihazo an’ny By pass ny fiarakodiaran-droa an’ireo olon-dratsy rehefa avy nandroba. Nahatratra teo amin’ny telo hetsy sy dimy ambin’ny efapolo tapitrisa ariary ny vola very.
FANAFIHANA SY FANOLANANA FAOBE
Tokantrano 12 no lasibatry ny jiolahy ny alatsinainy hariva teo Soamanandray ao anatin’ny kaominina Fieferana Avaradrano. An-tapitrisany ny tetibidin’ny zavatra very, roa no naratra ary nanamparan’ireo jiolahy ny filandratsiny ny zaza amam-behivavy. Tsahivina fa latsaky ny 10 km avy eo Ankadikely ity tanana ity.